Sida loo ogaado dhicitaanka dheelitirka aad ku leedahay Google Play Store | Androidsis
Sida loo hubiyo taariikhda dhicitaanka dheelitirka ee Google Play Store: way baaba'aysaa sanad kadib ogeysiis la'aan
Manuel Ramirez | | Khiyaamada Android, Tababarada
Sumcada aad kuheli laheyd Abaalmarinta Fikradaha Google Waxay leedahay taariikh dhicitaan oo waa inaad ogaataa inay baaba'ayso sanadkiiba ogeysiis la'aan Google. Taasi waa, haddii aad haysatay xoogaa yuuro ah, haddii aadan dheg u dhigin, oo aanad cunin, sannad ka dib markii ay heleen waxay ka baxayaan khadkaaga deynta.
Waxa aan fahmin waa sida Google ma soo ogeysiinaayo hadii amaahdu ay dhaaftay shay kasta oo weyn kara markay ku dhowdahay inay ka baxdo koontada. Marka Euro-yadaas aad keydisay adoo sugaya imaatinka kulan qiimo leh oo adiga xiiseynaya, waxaa qaadan kara Google adigoon xitaa ogeyn.
1 Orod waad ka dhammaatay!
2 Sida loo hubiyo amaahda laga heli karo Google Play
Orod waad ka dhammaatay!
Tan waxaan kugula talineynaa taas fiiri deyntaada waqti ka waqti iyo taariikhda dhamaadka lacagta haynta. Ma jiraan wax yar oo isticmaaleyaashood ah oo wata 30 Yuuroo oo laga yaabay maalin ilaa maalinta xigta markay ogaadaan in deyntoodu aysan jirin oo aysan jirin hab ay ku soo ceshan karaan.
Xaqiiqdii, ma xuma haddii weyn ee G ayaa xoogaa ka shaqeyn doona oo aan ka bixinno ogeysiis ogeysiisyada ah si aan u ogaanno inay naga harsan tahay toddobaad ama dhowr maalmood ka hor inta aan sumcaddaas "cunin" shirkadda; waad ogtahay, wax kasta oo aan la isticmaalin, ayaa sii jiraya yaa xajiya.
Tisweydiin mayno halka ay lacagta ku baxdo, laakiin mar uun dakhliga waxaa lagu sameeyay hal dhinac ama mid kale, ama shirkad saddexaad oo bixisa Google xayeysiinta ama adigu adigu ka hesho Abaalmarinta Fikradda Google. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso koontada oo aad aragto haddii euro-yadaas kuu hartay. Marka xigta ee aad u dukaameysato ciyaarta moodada, waxaa laga yaabaa inaad ku dhacdo lama filaan aan fiicnayn.
Sida loo hubiyo amaahda laga heli karo Google Play
Hadda, hubaal waad yaabtay sida aad ku ogaan karto amaahda aad si fiican u keydisay sida dahab maro ku jira koontadaada Google Play. Haddii aad koontada uga tagto nooca desktop-ka ee laptop-kaaga, waxaad isku arki doontaa hees ilkaha ku jirta, maadaama aan la heli karin. Qadarka Yuuroo ee aad keydisay ayaa soo muuqanaya, laakiin taariikhda ma dhigayo. Marka si sahal ah ayey uga bixi karaan gambaleelka alaarmiga oo waxay u qeylin karaan cirka iyagoo raadinaya hab ay ku sameeyaan.
Nasiib wanaag waan ku tusi doonaa. Waxay u egtahay sidan:
Waxaan tagnaa Google Play Store oo ku jira taleefankeena cusub ee Android.
Laga soo bilaabo guddiga dhinaca waxaan doonayaa inaan riixno "Hababka lacag bixinta".
Waa isla qeybtii aan ka raadin lahayn nooca desktop-ka, laakiin waxa aan raadineyno ayaa halkan ka muuqda: amaahda la heli karo iyo taariikhda uu dhacayo.
Hadda soo muuqan doono dheelitirka la heli karo ee Google Play oo leh qadarka saxda ah.
Kaliya hoosta, daabac yar, taariikhda uu dhacayo ayaa muuqata iyo qeexida saxda ah ee tirada la heli karo.
Kiiskeenna wuxuu ku yimid qiimo dhimis xayeysiis ah iyada oo loo marayo Abaal-marinta Aragtida Google.
Wuxuu dhacayaa July 4, 2020, marka waxaan haysanaa ku dhawaad ​​sanad aan ku bixino.
Sida google xilligan ma haysto wado uu ku dhawaaqoWaxaan kugula talineynaa inaad kalandarka lafteeda ka qaadato Google oo aad dhigto taariikhda uu dhacayo dhowr toddobaad ka hor. Marka waxaad heli doontaa maalmahaaga si aad u raadiso dalab xagaaga oo aad u isticmaasho euro-da aad haysato; haddii aad ku jirto dhacdada inaadan ku bixin wax dheelitirkaaga ah.
Marka waad garan kartaa waa maxay waqtiga uu dhacayo dheelitirka inaad ku leedahay dheelitirkaaga Google Play oo si sax ah u isticmaal ka hor inta weyn ee G uusan qaadan digniin la'aan. Dhowr euro ayaa dhaawici kara, laakiin haddii aan ka gudubno 10 ama 20 euro, dhab ahaantii waxay noqon doontaa dharbaaxo wanaagsan, maadaama lacagtaas aad ku iibsan karto ciyaaro tayo sare leh sida Waxyaabaha Qalalaasaha 3 o Mucaaradka Inc., si loogu raaxeysto quruxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo hubiyo taariikhda dhicitaanka dheelitirka ee Google Play Store: way baaba'aysaa sanad kadib ogeysiis la'aan
Sony Mobile Communications AB wuxuu joojiyaa shirkad ahaan
Fold Galaxy wuxuu horey u haystaa taariikh sii deyn ah